I caawi! Ma u baahan tahay dib u soo kabashada telefoonka mobile!
Hello, waxaan xogta ayaa la wareegaaya ka mid telefoonada gacanta kale, oo si qalad ah files tirtiray ka card qaldan. My music, sawiro, videos iyo waraaqaha oo dhan tageen. Sidee baan iyaga ka heli karto dib? Caawimaad kasta oo la qadariyo lahaa. Maxaa la sameeyaa?
Waxa ugu horeeya ee aad madaxa: Jooji wareejinta si degdeg ah, hana gelin wixii macluumaad cusub galay kaarka. Just ku hay meel ay u gaar ah, sababta oo ah data lumay la overwritten doona faylasha cusub, kaas oo hoos u dhigi doontaa sicirka ee soo kabashada macluumaadka telefoonka gacanta .
Maalmahan, oo ay la socdaan telefoonnada gacanta ee dheeraad ah oo awood badan, dadka u muuqdaan in ay waqti badan la qaato telefoonada gacanta smart u madadaalada, sida ku raaxaysan filimada iyo muusikada, sawiro qaado ama la sameeyo diiwaanka video, akhrinta buugaagta ama xataa xamili shaqada waraaqaha. Si kastaba ha ahaatee, in ay ka shaqeeyaan Qalabka telefoonada gacanta ma aha sida ku haboon sida kumbiyuutarada, waana sahlan inaad qaladaad samayso sida la tirtiro files ay hawlaha si taxadar la'aan. Xusuusta si ay u hayaan si joogto ah kuwa files muhiim ah. Markaas waxa la sameeyo haddii ay musiibadu yimaado oo aan hayaan? Waxaa sugan, waxaa degdeg loogu baahan yahay soo kabasho qalab mobile.
Sida loo helo kabsasho mobile phone shaqeeya ugu wanaagsan?
Sida ay u soo kabashada mobile, waxaa jira dad badan oo ku saabsan suuqa iyo wax badan oo ka run ahaantii kaa caawini kartaa in aad dib u files lumay taleefanada moobaylka ah u hesho. Markaas waa in aanu ka dooro mid ka fiican iyaga iyo ma ahan shaqo fudud. Haddii aad loo isticmaalo kaarka telefoonka gacanta oo markii ugu dheer, waxaa jira waa in lagu kaydiyaa malaayiin files. Sida loo helo kuwa aad rabto in aad iyaga ka mid ah? Magaca faylka asalka ah waa waxa ugu muhiimsan, kaas oo awood u tahay in la helo files diirada si degdeg ah oo sax ah. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan ma software kabashada mobile taageertaa taasi, wax badan oo ka baxshay file marka baar. Wondershare Data Recovery (la heli karo Win9) kaban karto, files la magacyada asalka file, oo ay taageerto dib u soo kabashada oo muusiko ah, videos, sawiro iyo dukumentiyada kale, sida iyo sidoo kale Wondershare Data Recovery for Mac (la jaan qaada Mavericks). Labada iyaga ka mid ah waa 100% ammaan ah!
Runtii shaqayn karaa? Soo qaado tijaabo ah oo si xor ah u iskaan for our telefoonka mobile xogta laga badiyay ka hor bixin.
Wondershare Data Recovery qaban karto soo kabashada macluumaadka telefoonka mobile ka noocyada kala duwan ee brand sida Blackberry, Nokia, phone Android, Samsung, HTC, iyo ka badan, iyadoo aan loo eegayn xogta laga badiyay ay sabab u tahay:
Files dhaco tirtiray ka kaarka telefoonka gacanta
Kaarka telefoonka mobile formatted
Kaarka telefoonka Mobile helay kharribeen ama geli karin
Hage 3-tallaabo inay u soo kabashada qalab mobile la Wondershare Data Recovery for Windows ama Mac
Tallaabada 1 . Connect kaarka telefoonka gacanta si ay computer ka iyo in la hubiyo in kaarka lagu ogaan karaa. Orod barnaamijka dooro kaarka si scan.
Tallaabada 2 . Ka dib iskaanka, Xiisaha iyo xaqiijin haddii files doonayo waxaa la helay.
Talaabada 3 . baartaa faylasha aad bartilmaameed oo uu bilaabo inuu ka soo kabsado.
Fiiro gaar ah: Mar kale ha badbaadiyo xogta soo kabsaday kaarka. Raadi meel kale, waayo, sida kombiyuutarka ama disk kale oo bannaanka ah, si loogu tixgeliyo ammaanka.
Video tutorial soo kabashada telefoonka gacanta
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka Mobile Phones